10 Ka Model ee Ugu Wax Soo Saarka Badnaa Sanadka 2011. - iftineducation.com
10 Ka Model ee Ugu Wax Soo Saarka Badnaa Sanadka 2011.
Tobanka model ee dabaqada sare ee ugu wax soo saarka badan aduunka sanadka 2011 sida lagu daabacay majalaha Forbes . Waa kuwaanaa qeyb kamid ah sidey u kala horeeyaan gabdhaha modelka magacyadooda iyo wax soo saarkooda intow gaarsiisan yahay.
10. Candice Swanepoel – USD$ 2 Malyuun.
Candice waxey ku guuleysatay iney heshay waxsoo saar gaareysa USD $ 2 malyuun oo dollar. Model 22 Jir oo asal keeda ka soo jeedo Koonfur Afrika waxey xayasiisaa dharka hoos laga qaato Victoria’s Secret.Ayadoo soo gashay Majalaha Vogue Italia Sanadkan ini waxeyna noqotay ikon dari brand denim, True Religion.
9. Natalia Vodianova – USD$ 4 malyan
Natalia waxey ku guuleysatay iney hesho Wax soo saar gaaraya USD$ 4 malyuun oo dolarka mareykanka ah, modelkan u dhashatay Rusia waxey noqotay ikon iyo milkiilaha lini lingerienya.
8. Carolyn Murphy – US$ 4,3 Malyuun
Modelkan aad u jeediinw waxey leedahay wax soo saar gaaraya US$ 4,3 Malyuun oo dollar, ayado lashaqeyneyso Estee Lauder, Iceberg, Fashion Island, Peek & Cloppenburg, Tiffany & Co. dan desainer Tom Ford.
7. Lara Stone – US$ 4,5 malyuun.
Modelkan oo asalkeda ka soo jeedo Holand waxey leedahay wax soo saar gaaraaya US$ 4,5 malyuun oo dollarka mareykanka. Waxey ku guuleysatay iney la saxiixato heshiis weeyn Versace, H&M, Forum, Prada dan Donna Karan. Markii ugu danbeysa, Lara waxey noqotay ikon eksklusif ee brand Calvin Klein Inc.
6. Daria Werbowy – US$ 4,5 Malyuun
Heshiis weyn ee lasaxiixatay brand parfum iyo kosmetik weyn, Lancome Paris, lagu daray wadashaqey kala dhaxeyso Hudson Bay, Stefanel, Joseph, Oroton, Versace, H&M dan YSL aya waxey sababtay Daria waxey ku guuleysatay iney hesho qiimo gaaraaya USD$ 4,5 malyuun oo dollar.
Sidaana Waa Kajirtaa Aduunka Hadii Gandhihii Qurxoonaa Lagadhigay Bodyguard (Sawiro).